Saamaynta Korona Fayrus Ku Leedahay Suuqyada Saliida iyo Gaaska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — March 22, 2020
Cudurkaan korona fayrus wuxuu sidoo kale saameyn ba’an ku leeyahay suuqyada saliida iyo gaaska. Dadka uu ku dhacay cudurka korono fayrus guud ahaan caalamka ayaa Axadda maanta ah gaartay ilaa iyo 300,000 oo qof. Sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka ee AFP, ugu yaraan 300,097 la xiriira caabuqaan halista ah ayaa la diiwaangeliyay aduunyada oo dhan, tan iyo intii uu soo billowday bishii December ee sannadki hore.
Dadka u dhintay ee isbitaallada lagu diiwaangeliyay ayaa gaaraya 12,895 oo dhimasho ah, ilaa iyo 169 waddan oo caalamka ah, sida ay maanta xaqiijisay Hey’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO. Dalka Talyaaniga ayaa hadda ah waddanka ugu dhimashada badan ee cudurka Coronovirus, kaalinta koowaad ayuu kala baxay Shiinaha. Talyaaniga waxay tirada dhimashada sii mareysaa ku dhawaad 5000 oo qof. Sabtidi ay ugu darneyd oo hal maalin gudaheed ay dalka Talyaaniga cudurkani ugu dhinteen ku dhawaad 800 oo qof.
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu markii ugu horreeyay maqlay korona fayruska bishii Disembar 31. Waqtigaas qiimaha Brent crude wuxuu ahaa $68 / bl. Waxaa tan iyo markaas hoos u dhacay qiimaha shidaalka, laakiin illaa Febraayo 4 waxay u muuqatay inay yar degganeyd qiyaastii $55 / bl isla markaana Febraayo 6dii OPEC + waxay ku talisay in la dhimo wax soo saar saliid dheeraadka ah 600,000 fuusto maalintii.
Xanuunkan korona, ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha aduunka. Dhinaca ganacsiga waxaa suuq yeeshay shirkadaha soo saara iyo dukaamada iibiya qalabka nadaafadda, iyo faya dhoowrka, laakiin taa cagsigeed waxaa xirmay inta badan ganacsiyada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, walaacyada iyo qiimaha saliida ee hooseeya way sii jiri karaan illaa laga helayo calaamado cad oo muujinaya in fayrasku ku fidayo. Saamaynta ay ku yeelanayso qiimaha LNG ayaa si isku mid ah u xoogan.
Suuqa caalamiga ah ee ‘LNG’ ayaa horeyba loo hayey ka hor inta uusan cudurka dillaacin coronavirus, iyo hoos udhaca baahida Shiinaha ee ka dhalatay faafitaanka ayaa daciifinaya xitaa cadaadis badan. Waxay sidoo kale saameyn ku leedahay dhoofinta caalamiga ah ee LNG.
Waqti kasta oo daba dheeraaday oo qiimaha saliida hooseeya wuxuu saameyn dheeraad ah ku yeelan karaa warshadaha saliidda adduunka – gaar ahaan warshadaha Mareykanka ee soo food-saaray caqabado oo qiimaha hooseeya – oo yareynaya awoodiisa maalgashi ee E&P.
Sanadka 2019 wuxuu ahaa sanad adag sababta oo ah qiimayaal aad u hooseeya awgood, iyadoo shirkado badan oo saliid ah, oo ay ku jiraan dhammaan majors-yada, ay soo tebiyeen faa’iidooyin aad u yar. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in waayo-aragnimadii ay soo martay qiimihii la midka ahaa ee hoos udhacday ay muujineysaa in saameynta ay ku koobnaan karto labo illaa lix bilood.
Bartilmaameedka JKM wuxuu hoos ugu dhacay $3.50, horraantii Febraayo, heerkiisii ugu hooseeyay muddo ka badan toban sano. Tani waxay dhalisay in madaxa shirkadda Shell, Ben van Beurden, uu yiraahdo “waa arrin aad u muhiim ah xagga horumarka, dad badan ayaa walwalsan, runtiina si dhow ayaan ula soconayaa waxa dhacaya.” Shell waa ganacsiga LNG ugu weyn adduunka. Bishii Janaayo waxay sheegtey inay hoos u dhacday 23% faa’iidooyinkeeda 2019 sababtoo ah sicirka saliida iyo gaaska oo hooseeya.
Tani waxay sidoo kale saamayneysaa qiimaha gaaska ee Yurub, illaa $2.70 / mmbtu bishii 5aad. Yurub ayaa durbadiiba daadku gaas ku keenay dalabka khafiifka ah ee cimilada, laakiin sidoo kale waxaa sabab u ah kala-soocidda LNG ee ka imaada Aasiya.
Soo-dejiyeyaasha Shiinaha ee LNG ayaa ka fiirsanaya tallaabooyin xad-dhaaf ah, sida dib-u-soo-dejinta xamuulka iyo xitaa ku dhawaaqista ‘xoog-tus weyn’. Xaqiiqdii suuqa saamiyada ayaa u muuqda inuu sidaas u fikiro.
Tags: Saamaynta Korona Fayrus Ku Leedahay Suuqyada Saliida iyo Gaaska
Next post Maxaa Kala Gudboon Soomaaliya Muranka u Dhaxeeyo Masar iyo Itoobiya?
Previous post Cudurka Korona Fayrus Ayaa Fara ba’an ku Haayo Dalalka Reer Galbeedka